Mpanamboatra sy mpamatsy voankazo tsy ampy rano ao Shina | Heritage
Ny voankazo lova nolovaina dia nendahina tamin'ny voankazo maina. Mety ho an'ny voanjo mifangaro, dite raokandro, flakes serealy mifangaro, ravaky ny gilasy ary fanaova.
Maina sy tsy miraikitra, mofomamy tsy misy fanovana, tsy mafy amin'ny maripana ambany, famerenana rano tsy misy loko.
Ny voankazo tsy ampy rano dia tsara ho an'ny tsakitsaky antoandro, na manampy amin'ny sakafo maraina toy ny oatmeal sy bubur quinoa. Ny voankazo dia azo fehezina manify (paoma, akondro, frezy, kiwi), tapatapahina kely (mananasy, paoma), avela manontolo (voaroy, manga, na voadio sy maina ho lasa hoditra voankazo.
Ny voankazo maina dia afaka manatsara ny fatra sy ny otrikaina mahavelona anao ary manome otrikaina maro be ny vatanao.
Ny fizotry ny tsy fahampian-drano dia mitazona ny lanjan'ny sakafo mahavelona amin'ny sakafo. Ohatra, ny poti-paoma dia hanana kaloria, proteinina, tavy, gliosida, fibre, ary siramamy mitovy amin'ny voankazo vaovao.
Mety hahazo ny tombony be indrindra avy amin'ny voankazo maina ny vehivavy, indrindra ho an'ny taolany. Matetika ny osteoporose dia mamely vehivavy betsaka kokoa noho ny lehilahy.
Ny voankazo maina koa dia afaka manatsara ny fahasalaman'ny fo. Ny voamaina voankazo maina dia misy antioxidant sy fibre betsaka kokoa noho ny voankazo vaovao iray grama. Ireo singa ireo dia ampahany tena ilaina amin'ny fitazonana ny fonao ho salama.
Ny cranberry maina dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny lalan-dra. Izy io dia mety hanampy amin'ny fitazonana ny fikorianan'ny ra tsy tapaka avy amin'ny fo mandritra ny bo
Voankazo voadio vitaina vita amin'ny orinasa China, Papaya voatahiry, Ny vokatra tsirairay dia vita tsara, hanome fahafaham-po anao izany. Ny entantsika amin'ny dingam-pamokarana dia voahaja tsara, satria hanome anao ny kalitao tsara indrindra izany dia hatoky tena izahay. Ny vidin'ny famokarana lafo nefa ny vidiny ambany noho ny fiaraha-miasa maharitra. Afaka manana safidy isan-karazany ianao ary azo antoka ihany koa ny sandan'ny karazany rehetra. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala manontany anay.
Teo aloha: Voalanjon'ny mena maina tsy ampy rano - Tanjona ra - lova
Voankazo tsy ampy rano
Hihamangatsiaka ny voankazo maina